Warar faahfaahsan |
Sida Loo Tolo Bacaha Aan- Tolka Lahayn
Ma doonaysaa in aad ogaato habka wax soo saarka ee bacaha aan tolnayn? Halkan waxaan inta badan ku soo bandhigeynaa habka wax soo saarka ee bacaha aan tolneyn. Habka wax-soo-saarka bacaha tolida: inta badan waxaa lagu sameeyaa mashiinnada gacanta, oo leh dun irbad cufan, qaab bac qurux badan, oo guud ahaan leh dhinacyo iyo guntooda. Kooxda G...
Kubado Xaraash ah oo la awoodi karo waa inaad mid haysataa (Waan Samayn karnaa)
Kubado shiraac ah oo bilaash ah oo lagu xardhay dukaanka buugaagta aad jeceshahay ama kooxdu wax badan ayay kaa sheegaysaa marka loo eego bacda qiimaha badan Instagram-ku ansixiyay #OOTD. Waxaan jeclaan lahaa inaan kan ka iibsan lahaa Desert Da...
9-ka Bacood ee ugu Wanaagsan ee Dib loo Isticmaali Karo ee 2020
by admin 20-07-11
9-ka Bac ee ugu Wanaagsan ee dib loo isticmaali karo Si gaar ah loo iibiyo, alaabooyinkan wax iibsiga waxay ku yimaadaan daraasiin midabyo ah, oo ay ku jiraan...
Habka daabacaadda ugu fiican ee bacaha dharka
by admin 20-07-04
Daabacaadda Biyaha Faa'iidada daabacaadda biyaha: Farsamadan daabacaadda ayaa ku dhammaynaysa dareen gacan jilicsan oo aad u jilicsan, midabka slurry wuxuu dhex galayaa fiber-ka, xawaaraha midabku wuu ka xoog badan yahay daabacaadda offset; Midabada/daabacan ayaa ah kuwo aad u qurux badan & isku mid ah oo ku yaal dusha sare ee dharka ama inte...
Farqiga u dhexeeya suufka cad iyo suufka suufka ah
by admin 20-07-02
Badi Iibiyaasha Bacaha Cudbigu waxay u qoraan Bacaha Cudbiga sida bac shiraac ah. Inkasta oo uu jiro farqi u dhexeeya Dharka suufka ah iyo kan Canvas. Iyada oo ku saleysan sida loo isticmaalo magacyadan waxay jahawareer badan ku abuurtaa isticmaaleyaasha shandada kubabada iyo kuwa iibiya bacda Canvas waa maro leh tidcad adag iyo...
Hordhac bacda suufka ah
Bacda suufku waa nooc ka mid ah bacda dharka ilaalinta deegaanka, waa mid cufan oo ku habboon, waarta, oo aan wasakhayn deegaanka. Waa dib loo isticmaali karaa, taasoo hoos u dhigaysa wasakheynta deegaanka ilaa xad. Bacaha suufka ah: Bacaha marada deegaanka u saaxiibka ah ee caalamiga ah ee caanka ah. Cudbi c...
Saamaynta dhaqaale ee bacaha aan timaha lahayn
Laga bilaabo bilawga mamnuucida, bacaha balaastikada ah ayaa si tartiib tartiib ah looga saarayaa suuqa baakadaha waxaana lagu beddeli doonaa bacaha aan tolmada lahayn ee dib loo isticmaali karo iyo mar kale dhibic, waxay tixgelin kartaa inaad ku darto mo...
Qiimaha suurtagalka ah ma iska indho tiri karo afarta faa'iido ee bacaha aan tolmada lahayn
Ilaalinta deegaanka bacda aan tolka lahayn (oo loo yaqaanno bac-xidhka aan-xidhka lahayn) waa badeecad cagaar ah, taas oo adag, waarta, qaab quruxsan, ku wanaagsan in la neefsado, dib loo isticmaali karo, la dhaqi karo, xariir-baaran, oo leh nolol adeeg dheer. Wixii hadiyado ah. Shandad aan tol lahayn oo deegaanka u wanaagsan ayaa ka dhaqaale badan F...
Dhaqanka shirkadaha - guangzhou tongxing baakadaha alaabta co., LTD
Shirkaddu waxay had iyo jeer diiradda saartaa hagaajinta xirfadda shaqaalaha, hagaajinta waxqabadka hay'adaha shirkadaha, abuurista jawi wanaagsan oo waxbarasho iyo shaqo, iyo kor u qaadida dhaqanka shirkadaha waara. Shirkaddu waxay soo abaabushay hab dhowr kanaal ah si ay u abuurto jawi waxbarasho...
Hambalyo Tongxing Bag Industry gudbiya kormeerka warshadda BSCI. Kormeerkii ugu dambeeyay ee warshadda BSCI waxa uu gudbay Disembar 27, 2019.
by admin 20-01-05
Alaab-qeybiyeyaasha Bacaha Cudbiga, Alaab-qeybiyeyaasha boorsada dharka lagu dhaqdo Hotel, Bacda suufka,